Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? - [Consulting International]
> Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense?
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense?
2019-04-13 2019-04-13 Consulting International Marketing
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : Izixhobo zonxibelelwano zidibanisa nge-Ezoic
Indlela yokwenza imali ngeblogi ngaphandle kwe-AdSense
AllFeeds rhoqo ukukhuthaza ukutshintshana kwesigaba
I-Media.net: Ukupapashwa kweeNkcazo kunye nePlatform yeProgram
Eyaziwayo, iNkokheli kwiNdawo yokuThengiswa kweDizi
Inethiwekhi yokuThengisa i-Chitika Online
I-Sovrn: iTeknoloji yokuThengisa abaPashi
I-Criteo: Isigaba sokupapasha kwi-intanethi evulekile
I-Ezoic - I-Intelligence Platform For Publishers
I-OpenX: Ukupapashwa kweProgram I-Ad Exchange Network
I-Kiosk - Qala ukwenza imali ngeWebhsayithi yakho
Amatyala: I-Global Media Platform
Abantu abaninzi baye baqalisa ukusebenzisa i-Google ye-AdSense program, kodwa baninzi abathi bayifumanisa into engathandabuzekiyo okanye bengayifuni imfuneko yabo ngokwabo kwiprogram yentengiso.
Yiba njalo, ngokunenhlanhla ngabantu abanjalo, kukho iindlela ezininzi ze-AdSense ezizama ukukhanyisa inxalenye yokungaphumeleli kwayo. Nantsi ingqungquthela yezona zinto zibaluleke kakhulu kunxalenye kunye nesicaciso malunga nento nganye.
Isigqibo sethu: I-Ezoic, eya kukufumanisa umrhumo oyimangalisa yenkampani yesikhangiso, ngale ndlela ukwandisa imali yakho.
Ezoic | I-Intelligence Platform For Publishers
Ingeniso yokunyuswa kwenyusa 50-250% nge-Ezoic. I-Google Partner Publishing Partner.
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : Ukunyuka kwenyuka kunye namaqabane e-Ezoic mediation
I-AllFeeds ineqonga eliqhelekileyo labaxhasi be-intanethi ukujonga. Ukongezelela kubandakanya ezininzi iimpawu zokubonakalisa ongayiphequlula. Ezi zibandakanya i-pennants, i-catch, i-XML ixhasa, i-DHTML pop-ups, njl. Ukongezelela kubandakanya ukuhlaziywa rhoqo kwesimo sakho sokuphakamisa. I-site iya kuthumela i-check nganye inyanga, inikezele ukuba ufumane enye ngaphezulu i-$ 25.00, ngelixa uhamba phambili kwinzuzo kule nyanga elandelayo kwithuba elingenayo. Enye into ebangelisayo ngeAllFeeds kukuba ibandakanya ne-Google AdSense, ukukhulisa ingeniso yakho nge-AdSense.
Zonke iifayili | ISIHLOKO SOKWENZA KWENKQUBO YEZICWANGCISO SOKWENZIWA KWABASEBENZI ABAKHULU
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : Website yeAlls
I-Media.net ikuvumela ukuba unelungelo lobuhle lokubeka ukulinganisela kwisayithi lakho. Ukongeza ukwenza ukwazi ukuvumela okanye ukugatya nayiphi na inxibelelwano ebonisa kwindawo yakho (nangona i-AdSense ngokwayo igqiba umsebenzi omkhulu kakhulu, naloo mzila ye-URL) Kwakhona inxalenye yesilinganiselo eya kukukunceda ukuba uqonde indlela isayithi ihamba. Ukukhushulwa akufani nje ne-AdSense kwaye bafana nokulula ukusetha. Ngokufanayo, ukubhaliswa kwe-Media.net kukhululekile.
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : Website yeMedia.net
Ukwahlukileyo kukwahlukileyo kwiimeko zokuba ngabaxhasi bahlala bephila ngokukhawuleza kwisayithi yakho, leyo leyo ihloselwe ngokukodwa ukuvelisa inzuzo enokumangalisa kakhulu kwiphepha lakho. Ukongezelela kunesitya esikhulu sabakhuthazi esiqinisekisa ukuba baninzi abantu ukukhetha indawo yakho. Yiba nokuba kunjalo, kufuna ukuba ihlambuluke imveliso eseduze kunye ne-AdSense. Njengokuba zininzi zendawo, ukuqonda okuqhubekayo kufumaneka kwaye kulula ukuqala ngalo lawulo, kodwa ngakolunye uhlangothi luyakulungelelanisa.
Uqeshwe ... INkokheli kwiNdawo yokuThengiswa kweDawulo
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : Iwebhusayithi
I-RealContext isebenzisa ingqiqo yokusebenza yokufumana ukukhushulwa okubalulekileyo kwiphepha lakho. Ukongezelela, kukho inxalenye eyongezelelweyo eyenza i-RealContext ephawulekayo nayo. Iinqununu zikhethiweyo zixhomekeka kwii-determinations ezidlulileyo ezihlawulwayo kwaye ezingenayo. Oku kuthetha ukuba kukho inkqubo yokugxekwa okuqhubekayo okuqinisekisa ukuba ukwandisa ingeniso engcono kwimveliso yakho. Ukongeza ukongeza ukukhusela abathile kubandakanya kwaye uthayiphe ukwahlukana ngokukhuselekileyo kunye nokukhetha okungakumbi.
I-Chitika - Intengiso yeNtengiso ye-Intanethi - apho ulwazi luqhuba phambili
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : Website yeChikitika
I-RhythmOne yinkampani enkulu yokuxhaswa enengqiqo. Njengoko i-AdSense, iirhwebo zijoliswe kuyo kodwa akayekanga apha nayiphi na indlela. Ukukhushulwa kulungelelaniso, unokukhetha kwiimpapasho eziphathekayo, iiflegi, imilo yesikwere, ukuphuma kwamaphepha, ukuphakama kwamaphepha okanye ukuphakama okuphezulu. Ungakwazi ukubonisa ukukhushulwa kwakho, ngokuguqulwa kweendawo, kokubili kwisayithi yakho nakwezinye iindawo ezincedisayo, okwenza iRhythmOne ibe ngumxube ngokuqhubela phambili ngokupapashwa. Kukho umbandela ogqithiseleyo kwi-line rhoqo ebonakalayo kwaye kwaye, njengento efana nolawulo olunjalo, ukuqala kukhululekile kwaye kuyintlambo.
RhythmOne - Ikhaya
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : RhythmOne iwebhusayithi
I-Komoona ineendawo eziphakanyisiweyo zokukhuthaza, onokuzenzela zona ngokulula ukusebenzisa ukusetyenziswa kwikhompyutha. Ngokufanayo ufumana ukutyhilwa kwexesha langempela ne-snaps by-endaweni, iphepha kunye nomfaki. Kukho ukusebenzisana ne-Google AdSense kwakhona, ngokusebenzisa i-google_alternate_ad_url ukwenzela ukuba i-Komoona ingasetyenziselwa indawo ye-Google PSA (IiNkonzo zeNkonzo zikaRhulumente).
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : Iwebhusayithi yaseKomoona
Ukukhutshwa kwe-Sovn kwenza ukuba abashicileli bafumane izibhengezo ezichongiweyo kwizifundo okanye kwiingxenye, kwaye kungekhona i-watchword eqhelekileyo ekukhusheni. Indawo yokudibanisa iindawo ezihambahambayo kunye nabakhuthazi ngezandla ukuqinisekisile izipapasho zentengiso ephezulu. Ngaphezu koko, ukuthetha ngemali engenayo, umlinganiselo wemali oyifumanayo isingeniso esingenakunqwenelekayo somyinge wemali.
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : Sovrn iwebhusayithi
I-Criteo ilungiselelwe ngakumbi kwizinto ezisasazwayo. Inika igunya elipheleleyo phezu kwenkqubo yokukhangisa, imilinganiselo kwi-site yakho jikelele kunye nokufumana ingeniso engcono. Kuvumelekile ukuba ubhale kwaye uphumelele u-60% wemali engenayo epheleleyo. Unokufumana ukuhlawulwa nge-Paypal yeBhanki ukuhlola kunye (ezininzi izihlandlo) kunye nokutshintshana kwentambo.
I-Criteo: Inqanaba lokukhuthaza i-Intanethi evulekile
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : Website yeCriteo
I-Ezoic izakukufumana ubuninzi be-60% ukusuka kumyinge wekhemithi yakho isayithi. Oko ufumene kungaphezulu kwe-AdSense, unokubona imali evela kwisiza sakho ikhula ngokukhawuleza. Unokufumana imali nge PayPal okanye ngetshekhi ngezikhathi eziqhelekileyo, wanikezela ukuba uzuze yonke imali eyi-$ 50. Kwimeko apho ungenzi nto eninzi, ukuphumelela kwakho kudlulela kwixesha elilandelayo.
Ukunyuswa kwengxelo yentengiso ingeniso ye-50-250% nge-Ezoic. I-Google Partner Publishing Partner.
Idesksi yoRhwebo | Umbono ocacileyo ngakumbi ekukhuthazeni phambili
Njengo-AdSense, i-Trade Desk ibonisa ukukhushulwa kokuqukethwe kwiphepha lakho. Kwimeko nayiphi na into, ukwahlukana kwindlela abantu abaxhamlileyo abonelela ngayo indawo yokukhuthaza, ukuqinisekisa ukuba unokufumana inzuzo eninzi njengoko unako. Oku kwongezwa ukuba izibonelelo ziya kukwandiswa emva kwexesha elithile, ukufumana imali eninzi kakhulu. Ngokufanayo ufumana indlela engafanelekanga yokuguqula ukukhutshwa kwakho ngokulula ukusebenzisa izixhobo kunye neengxelo ze-nitty ezinobungqina kwisimo sakho sewebhusayithi.
Idesksi yoRhwebo | Umbono ocacileyo ngakumbi ekuvakaliseni phambili
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : Indawo yeTradeDesk
I-Smaato: UkuThengiswa kweSelula kunye neNkqubo yokuPhathwa kweeNkqubo
U-Smaato ufezekisa ukubaluleka ngokubeka ishaneli njengoko kuboniswe ukuhlelwa kwendawo yakho. Kwakhona kunika neengxelo ze-imeyile yesimo sakho sewebhusayithi kunye nethuba lokubandakanya izibhengezo zakho zenkcubeko ezongezelela ukukhushulwa ezingenakuthabatha nayiphi na ingeniso. Ukusekwa kuyisisiseko, ngokunjalo kwi-AdSense kwaye iguquke kakhulu. Iziko kunye neziphathekayo kunye nezicelo.
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : Indawo yeSmaato
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : Indawo yeThathu
I-IPONWEB - iNkokeli yehlabathi jikelele kwiTeknoloji yokuThengisa iiNkcazo
Iimeko ze-IPONWEB zokubamba izinto ezintsha ezinokusetyenziswa kunye nokuqonda iphepha lakho lewebhu, ukunika amandla ukubonisa i-substance echaphazelekayo kwiwebhusayithi yakho. Ngaphandle kokukhushulwa komxholo, i-IPONWEB igxininisa ukubaluleka kokulungiswa kwemibandela njengoko kuhleli ukuvakalisa ukuvakalisa. Kuyinto enzima kunzima ukuyenza kwaye inendlela yokufaka i-installment efanelekileyo.
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : IPONWEB isayithi
I-OpenX ijolise kubanikezeli abancinci nabancinci bezabelo. Iququzelela ibhokisi lokukhangela incedo kwaye iquka izinto ezinjenge-Directory yecandelo njengonyango lwamakhasi angangama-404. Oku kulungelelaniswe kakuhle kunye nephepha lakho usebenzisa i-wizard esemgangathweni.
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : Kwi-OpenX site
I-Kiosk ikunika iipesenti ezingama-65 zezinto ezenzayo kwikhakiti kwiziko lakho. Iifakelo zenziwa inyanga inyanga, ngokusebenzisa i-PayPal okanye ngokuhlola. Ukukhushulwa kunokuklanywa njengoko ufisa, kwaye i-Kiosk inikeze nokunikezelwa kolawulo lwamahhala ngabanye abantu kwaye akukho ntlawulo efunekayo ukuba ibhalise kunye nolawulo.
I-Trion Interactive inikezela amathuba okubhengezwa kweempapasho ezinengqiqo, oku kuthetha ukuba ukunyuswa kuya kutshintsha xa iphepha lakho lithatha. Kuyinto enzima kunzima ukuyisebenzisa kwaye ivumelekile ukuba iyicule kwaye inikeze ilungiselelo lokufakelwa ngokuthe ngqo. Izibhengezo ziyakulungelelaniswa ngokupheleleyo kwaye iingxelo eziqhubekayo ziya kufumaneka rhoqo ngomzuzu ngamnye.
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : I-Trion site enembile
Amatyala anika abahambisa ithuba lokudibanisa izikhangiso zomxholo kumaphepha abo. Ezi zenziwa ngamanani athile, kunye neziza ozithandayo ngesandla ukuze zichaze iimpawu ezimbalwa kunye nesicwangciso esikhulu sokukhuthaza. Nawe unokhetho lokubandakanya "I-Yongeza Yakho Yona" kubamba ukuba abathengi banokukhawuleza ukukhawuleza kwisithuba sokubhengezwa kwiphepha lakho. Iyakwazi ukusetyenziswa ngokunxulumene ne-Google AdSense, ukwandisa i-CTR yakho kunye nokunika abaxhasi amathuba okubonisa ukudibanisa kwabo kwi-Google AdSense space. Unamagunya apheleleyo phezu kokubukeka kunye nokuziva kwakho kubandakanya okokugqibela, ufumana i-75% engummangaliso yento eyenziwa ngabarhulumente kwi-snap nganye.
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : Amatyala: I-Global Media Platform
Ngaloo ndlela, njengoko kufanele ukuba kubonakale kukho iingcamango ezininzi malunga nokukhuthaza oku, kwaye amaninzi amaninzi axhomekeke kwi-AdSense efana nokupapasha. Ngokufanayo, itoni yokulawula inokubambisana ne-AdSense ukufumana inqanaba eliphawulekayo lokufumana ingeniso kwisithuba sakho sokubhengezwa.
Ukhetho lwethu oluthandayo nangona lu-Ezoic, olulawula ukhuphiswano phakathi kwazo zonke ezi qabane.
Iyiphi enye indlela engcono kwi-AdSense? : Ukunyuswa kwengxelo yentengiso ingeniso ye-50-250% nge-Ezoic. I-Google Partner Publishing Partner.
I-AdSense enye, intengiso yenethiwekhi, ntengiso kwi intanethi, ukwenza imali ngewebhusayithi, yezoic advertise, imali yokwenza imali, fumana imali kwi-intanethi,
Iyintoni inzuzo ye-Google AdSense?
Ngaba i-Google AdSense iyiluncedo kwisayithi yam?
Ziziphi iinzuzo ze-AdSense?
Yintoni echanekileyo ukuchofoza kwi-AdSense?
Ungayisebenzisa njani i-AdSense kwiwebhusayithi yakho?
Ngaba kufuneka ukhethe ukuthengiswa kokuqukethwe okanye uhlawule ngokuchofoza?
Yiyiphi impembelelo ye-AdSense kuluntu kunye neWebhu yehlabathi jikelele?
Igama* Imeyili* Iwebhusayithi I ngxelo*
Instagram ndibuze umbuzo - ungayisebenzisa njani?
UtshintshiselwanoGcina i-app yokudlulisa imali yehlabathi
Iingcali zobuchule ukugqoka intamo yakho entanyeni njengobungcali bakho
Cwangcisa-Ukuthenga-Intlawulo, njani inkqubo ye-Ariba isebenza?
Umyinge weeyure zokusebenza ngelizwe
Unokukhetha njani umqhina omhle womyili?
Indlela yokunyamekela ityayi ekhaya?